मिस वर्ल्डमा नेपाल सुन्दरी चन्दकले के पाइन् ? « Ramailo छ
मिस वर्ल्डमा नेपाल सुन्दरी चन्दकले के पाइन् ?
चीनमा सम्पन्न मिस वल्र्ड २०१७ को उपधी छिमेकी मुलुक भारतकी मानुषी छिल्लरले जितेकी छिन् । १७ वर्ष पछि भारतले सिम वल्र्डको उपधी जितेको हो । यो सँगै उसले छैटौं पटक मिस वर्ल्डको उपधी जितेको छ । पछिल्लो पटक भारतबाट प्रियंका चोपडाले मिस वल्र्डको उपधी जितेकी थिइन् । नेपाल सुन्दरी निकिता चन्दकले चाहिं मिस वर्ल्डमा सहभागी भएर के पाइन् त ?
नेपालकी सुन्दरी निकिता चन्दक भने उत्कृष्ट ४० मा पर्न सफल भइन् । उनी, पपलुर विधाको उत्कृष्ट १० मा पनि पर्न सफल भएकी थिइन् । मानुषीको जन्म सन् १९९७ मे महिनाको १४ तारिखमा भएको हो । ६७ औं मिस वर्ल्डको ताज मानुषीले लगाउँदा फस्ट रनरअप मेक्सिकोकी एन्ड्रेया मेजा र सेकेन्ड रनरअप वेलायतकी स्टेफेनिया हिल भइन् ।